यी नायिकामध्ये को उत्कृष्ट ? तपाई पनि आफ्नाे भनाई राख्ननुहाेस है – ताजा समाचार
यी नायिकामध्ये को उत्कृष्ट ? तपाई पनि आफ्नाे भनाई राख्ननुहाेस है
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अहिले नायिकाहरुको निकै प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । हुन त कुनैपनि नायिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धा अरुसँग भएको बताउँदैनन् । तर दर्शकले नै प्रतिस्पर्धाको भावना जगाइदिन्छन् । अहिले चर्चाको शिखरमा केही नायिकाहरु छन् जो निकै व्यस्त र डिमाण्डेड नायिकाहरु हुन् ।